Fahasamihafana eo amin'ny memcached sy redis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny memcached sy redis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Database / Fahasamihafana eo amin'ny Memcached sy Redis
Fahasamihafana eo amin'ny Memcached sy Redis
7 Janoary 2018 Narotsak'i Lithmee
Fahasamihafana lehibe - Memcached vs Redis
Ny tahiry ifandraisan'ny fifandraisana dia karazan-tahiry mahazatra, saingy tsy mety amin'ny fitehirizana antontan-kevitra marobe. Noho izany, nampidirina ny NoSQL . Midika ho an'ny tsy fifandraisana na tsy SQL. Memcached sy Redis dia voasokajy ho NoSQL. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Memcached sy Redis dia ny Memcached izay loharano misokatra , ny rafitra fitadidiana caching fahatsiarovan-tena avo lenta izay afaka hanafainganana ny lozisialy amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny enta-mavesatra tahiry ary i Redis kosa dia loharano misokatra sy fivarotana manan-danja hananganana rindrambaiko azo zahana. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny Memcached sy i Redis.
2. Inona no atao hoe Memcached
3. Inona no atao hoe Redis
4. Ny fitoviana eo amin'ny Memcached sy Redis
5. Fampitahana mifanila - Memcached vs Redis amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Memcached?
Memcached dia loharano misokatra, fampisehoana avo lenta, rafitra fitadidiana cache. Izy io dia fivarotana data maharitra. Ny tombony lehibe an'ny Memcached dia ny fampihenany ny enta-mavesatra, noho izany dia mahomby sy haingana kokoa ho an'ireo tranonkala manana enta-mavesatra be.
Ao amin'ny Memcached, misy ny baiko fitahirizana, ny baiko retrieval ary ny baiko statistika. Ny baiko fitehirizana sasany dia napetraka, manampy, manampy sns. Ny baiko "set" dia ampiasaina hametrahana lanja vaovao amin'ny lakile vaovao na efa misy. Ny baiko "add" dia ampiasaina hametrahana lanja amin'ny lakile vaovao. Ny baiko "solo" dia ny manolo ny sandan'ny lakile efa misy. Ny baiko "ampidirina" dia afaka manampy data vitsivitsy amin'ny lakile efa misy. Ny "mahazo", "mamafa" dia baiko famerenana. Ny baiko "mahazo" dia ampiasaina mba hahazoana ny sanda voatahiry ao anaty lakile. Ny "mamafa" dia azo ampiasaina hamafana lakile efa misy.
Inona no atao hoe Redis?
Izy io dia loharanom-baovao misokatra, fivarotana firaketana angona fitadidiana, ampiasaina ho tahiry, cache , ary mpivarotra hafatra. Redis dia mijoro ho an'ny mpizara rakibolana lavitra . Mitahiry tahiry amin'ny endrika manan-danja izy io. Raha te hifandray amin'ny tahiry dia tokony hampiasa baiko ny mpampiasa. Ny baiko dia omena amin'ny alàlan'ny Redis Command Line Interface (CLI). Ohatra, departemanta = "IT". Eto, ny departemanta no lakileny ary ny "IT" no sandany. Ny mpampiasa dia afaka manoratra data amin'ny fivarotana data Redis amin'ny alàlan'ny baiko, "SET". oh ATOKOA "departemanta" "IT". Avereno alefa ny tahirin-kevitra arakaraka ny sanda lehibe. Ny mpampiasa dia afaka mamaky angona amin'ny baiko "GET". oh GET "departemanta". Averin'i Redis ny sanda mifanaraka amin'izany lakile izany.
Tsotra sy mora ampiasaina ny Redis. Izy io dia voasokajy ho tahiry NoSQL. Tsy toy ny rafi-tahiry fifandraisana toy ny MySQL, Oracle , ny Redis dia tsy mampiasa latabatra hitahirizana data. Tsy mampiasa baikon'ny SQL mahazatra toy ny select, Delete, create, fanavaozana sns. Ny firafitry ny angon-drakitra lehibe dia ny String, Lists, Sets, Sort Sort ary Hashes, bitmaps sns. Redis dia voasoratra amin'ny fiteny C , ary izany dia rafitra open-cross-platform.
Sary 01: Redis
Ny tombony lehibe an'ny Redis dia ny fitazonana ireo data ao anaty fitadidiana. Mahatonga haingana an'i Redis izany. Izy io koa dia afaka manoratra data amin'ny kapila. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny caching system na database feno. Tombony iray hafa dia azo ampiasaina miaraka amin'ny tahiry hafa. Raha tokony hiditra amin'ny tahiry fototra, Redis dia afaka mitahiry miditra matetika amin'ny angon-drakitra, ary ny ambiny data dia azo alaina avy amin'ny tahiry lehibe. Manaraka ny maritrano master-andevo. Manome fahombiazana, fanitsiana ary mora ampiasaina izy io.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Memcached sy Redis?
Ny roa dia sokajiana ho NoSQL.
Samy mitahiry data amin'ny endrika soatoavina fototra.
Samy afaka mitahiry data ao anaty fitadidiana izy roa.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Memcached sy Redis?
Memcached dia loharano misokatra, fampisehoana avo lenta, rafitra caching fahatsiarovana nozaraina izay afaka hanafainganana ny rindranasa amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampihenana ny enta-mavesatra. Redis dia loharano misokatra, fivarotana manan-danja izay azo ampiasaina ho toy ny tahiry, cache ary mpampita hafatra.
Memcached dia sarotra apetraka noho ny Redis. Mora kokoa ny mametraka sy mampiasa ny Redis.
Memcached dia tsy manohana famerenana. Manohana ny famerenana andevo andevo i Redis.
Memcached dia manana tadiny sy angovo bilang karazana data. Redis dia manana karazana data toa ny tadiny, Lisitra, Hashes sns.
Ny hafainganam-pandikana / soratan'i Memcached dia avo kokoa noho i Redis. Haingam-pandeha ny hafainganan'i Redis mamaky / manoratra, fa miankina amin'ny fampiharana novolavolaina.
Famintinana - Memcached vs Redis
Memcached sy Redis dia voasokajy ho NoSQL. Tsy mampiasa ny Fiteny Query voarindra izy ireo amin'ny fitehirizana, fanangonana ary fanodinkodinana angona. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Memcached sy Redis dia ny Memcached izay loharano misokatra, ny rafitra fitadidiana caching fahatsiarovan-tena avo lenta ary i Redis dia loharano misokatra, fivarotana manan-danja hananganana rindrambaiko azo zahana. Miankina amin'ny fampiharana ny fampiasana Memcached na Redis. Redis dia azo ampiasaina raha ilaina ny firafitry ny angon-drakitra mandroso. Memcached dia ilaina amin'ny fampihenana ny tahiry database sy ny fanafainganana ny rindranasa tranonkala.
Sintomy ny kinova PDF an'ny Memcached vs Redis
Azonao atao ny misintona ny kinova PDF an'ity lahatsoratra ity ary ampiasao izany ho an'ny tanjona ivelan'ny Internet toy ny isaky ny naoty. Azafady mba ampidino eto ny kinova PDF eto
1.Fampahalalana momba ny fandaharam-pianarana. YouTube, YouTube, 16 Jolay 2017. Hita eto
2.Gaurav Agrawal, injenieran'ny lozisialy ao amin'ny Webdunia, mpanaraka Drupal Follow. “Redis vs Memcached.” LinkedIn SlideShare, 23 Oktobra 2015. Hita eto
3.YouTube, Raghav Pal, 24 Apr. 2017. Hita eto
1.'redis 'nataon'i othree (CC BY 2.0) avy amin'i Flickr
Fahasamihafana eo amin'ny SQL Server 2008 sy Express Fahasamihafana eo amin'ny mpanafika miharihary sy ny mpamadika mazava Fahasamihafana eo amin'ny PL-SQL sy ny T-SQL Fahasamihafana eo amin'ny Arraylist sy Vector Fahasamihafana eo amin'ny normalisation sy ny normalization
Filed Under: Database Tagged amin'ny: Ampitahao amin'ny Memcached sy Redis , Memcached , Memcached sy Redis samy hafa , Memcached sy Redis fitoviana , Memcached Wikibolana , Memcached Replication , Memcached Speed , Memcached Ampiasao , Memcached vs Redis , Redis , Redis Wikibolana , Redis Replication , Redis Speed , Redis Use , mpizara rakibolana lavitra
Fahasamihafana eo amin'i Apatosaurus sy Brachiosaurus
Fahasamihafana eo amin'ny FTA sy PTA
Fahasamihafana eo amin'ny fahatsapana optika sy ny tsy fahampiana
Fahasamihafana eo amin'ny tantely sy ny scabies
Fahasamihafana eo amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fotoana